Maxay Raggu sidaasi ugu qiimeeyaan xuubka bikrada gabadha iyadoo la farsameyn karo?… – Hagaag.com
Maxay Raggu sidaasi ugu qiimeeyaan xuubka bikrada gabadha iyadoo la farsameyn karo?…
Posted on 20 Agoosto 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
In kasta oo aroosku uu abuuro farxad hadana wuxuu abuuri karaa walaac weyn oo bulshada inteeda badan qabta, hadana waa mid si gaar ah ugu cayiman bulshooyinka Bariga.
Haween ka soo jeeda asal bulsheed kala duwan ayaa la hadlay BBC Carabiga oo ku saabsan saameynta ay leedahay habeenka ugu horreeya ee guurka ama guri geynta iyo sida ay uga maqan tahay aqoonta galmada ama dhaqanka bulshada oo ayna uga muuqan nolosha guurka.
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa waaya-aragnimada haween da’dooda ay kala duwan tahay. Haweenkaasi miyey ka hadleen “dulinimo dareen leh” oo ah talaabada ugu horeysa ee nolosha guurka ama miyay u gudbiyeen bulsho aan wax dhibaato ah ku ahayn mowqifka ninka wax guursaday.
Sumaya ayaa waxay iska horimaad dheer la gashay qoyskeeda, oo diidey inay guursato Ibraahim, oo ay jeceshahay oo si aad ah u difaacday, maxaa yeelay waxay moodeysay inuu yahay ninka ugu habboon ee gabar kasta ay ku riyooto, oo markay gaartay riyadeeda, waxay si dhakhso ah ula kulantay naxdin oo aynan sidaa u fileynin.
Waxay ahayd habeenki ugu horreeyay oo ay ku kulmaan guriga guurka oo loo yaqaano “habeenkii gelitaanka” kaasi oo la waayey inkastoo ay isu qabeen jacayl aad u weyn, sababo shaki uu ka qabay bikradeeda.
Sumaya, 23, ma dhammaysan karin maaddooyin kooban oo ka haray waxbarashadeedii suugaanta luqada Carabiga ee Jaamacadda Dimishiq, sababta oo ah waxay ku mashquulsanayd Ibraahim oo u ballanqaaday inuu u furi doono jawi ku habboon oo ay waxbarashadeeda ku dhameysato.
Sumaya waxay guursatay bishii Maarso ee la soo dhaafay, in kasta oo qoyskeeda ay ka soo horjeedeen maxaa yeelay ma jirin guri u khaas ah marka hore, iyo iyadoo weli aan ka qalin jebin jaamacada. Laakiin waxay ku adkaysatay mowqifkeeda, iyada oo ay rumeysneyd jaceylka uu u qabo iyo taageeradiisa, qof walba ayaa ku dooday oo sheegay inay diyaar u tahay inay la noolaato hooyadiis, oo ay u ixtiraamto sidii hooyadeed oo kale.
Habeenkii kulanka ee ugu horeeyey, Sumaya waxay la kulantay naxdintii ugu horreysay “ka dib markii ninkeedii uu u galmooday asaga oo aan siinin waqti ku filan oo ay ku nasan karto, laakiin wuxuu isku dayay inay bikradnimadeeda si dhakhso ah u jebiyo asaga oo ku marmarsiyoonaya jeceylka uu u qabo awgiis.”
Sumaya ayaa waxay tiri: “Waan u debecsanaa oo waxan la sameeyey iskaashi, waan u dulqaatay dhibta oo waan aqbalay inkasta aan dareemayey daal aad u xoogan, laakiin ereyadii jacaylka iyo kalgacalka ayaa si lama filaan ah u baaba’day, wajigiisa iyo astaamihiisiba way isbadaleen daqiiqado gudaheed. asaga oo si shaki iyo dhagari ay ku dheehan tahay ayuu ku yiri “dhibic dhiig ah ma laha”.
Sida caadada ah Haweenka intooda ugu badan waxay la kulmaan dhiigbax, in kasta oo ay ku kala duwan yihiin furiinka bikrada, Laakiin sida laga soo xigtay dhakhaatiirta iyo khubarada takhasuska u leh arrimahan, ayaa sheegay in aanan aheyn shardi muhim ah, kumana dhacdo sidaasi Haweenka dhamaantooda.
Waxaa jira qaabab badan iyo noocyo kala duwan ee xuubka bikrada u sameysan, qaar ka mid ah lama goyn karo ilaa la qalo mooyee, qaarkoodna waa khafiif oo laga yaabo inay go’do iyadoo aan la arag wax dhiig ah, sidoo kale qaar ka mid ah gabdhaha kuma dhashaan xuubka bikrada ama waxaa dhici kara in caruurnimadooda shil ku dhacay.
“Waqtigaas, wuxuu ii eegayey sida mindi la iiga suray xabadka, wuu i diley asaga oo aan is ogeyn, xitaa iskuma dayin inuu ila hadlo, wuxuu iga tagey si dayac ah sidii qof eedeysan oo sugaya in la maxkamadeeyo.”
“Wax badan ayaan ka wada hadalnay guurka ka hor, xitaa habeenka arooska, kaasoo ay aheyd inuu noqdo habeenka ugu farxada badan. Waxaan moodayay inaan waxyaabo badan aan iska naqaano, laakiin wixii oo dhan waxay raaceen hawada kadib markii la arki waayey calaamadaha waxa loogu yeero bikrinimada”, ayey raacisay.
In kasta oo ay soo noqnoqotay dhacdooyinkan noocan oo kale ah ee ku dhacay bulshadeena, hadana Sumaya ma aysan fileynin inay la kulmi doonto isla dhibaatadan, waayo waxay rumeysaneyd in maskaxda dhalinyarada hadda joogta in ay wax iska beddeleen wixii ay ku jireen xilliyadii awoowayaasheeda, iyo iyadoo saaxiibkeeda uu ahaa aqoonyahan jaamacadeed oo furfuran. Laakin ” koronto ayaa igu dhegtay kadib markii uu ii soo bandhigay in aan booqano dhakhtar maalintii labaad ee Guurkeena si loo hubiyo bikradeeda. ”
Caadada bikrada ee Gabdhaha ayaa loo celiyaa waqtiyadii qadiimaga ahaa, sababahooda iyo hababka baaritaankana way ku kala duwan yihiin bulshooyinka, weli mujtamacyada muxaafidka ah waxay wali u dabaaldegaan bikradnimada gabadha habeenka guurka hab dhaqan aan caadi aheyn, sida iyadoo la soo bandhigo gogsha sariirta si loo tusiyo labada qaraabo ee labada dhinac, mararka qaarna waxaa loo sameeyaa xaflado lagu xoojinayo muhimadeeda.
In kasta oo ay fududahay in lagu soo celiyo xuubka bikrada qalliin si fudud, waxaa sidoo kale jira xuub ay farsameysay Shiinuhu sanado badan ka hor, sida kiiska Rosanna oo qaar badan oo ka mid ah wali waxay la kulmayaan dhammaad kala duwan oo qaarkooda ay xataa gaareyso dil kaasi oo loogu magac daro “dhaqida ceebta.”
Markii ay booqatay dhakhtarka kuwa dumarka maalinta ku xigta ee guurkeeda, waxay u xaqiijisay inay xuubkeeda bikrada qara weyn yahay isla markaana uusan meesha ka bixi doonin gebi ahaanba ilaa dhalmada koowaad oo dabiici ah mooyee, ayey tiri.
Ninkeedii ayaa wuxuu dareemay xasillooni, waxaa wajigiisa ku soo noqotay dhoola cadeyn, laakin waa goor dambe, gabadha yari ayaa gaartay go’aankeeda, waxayna go’aansatay inay sida ugu dhakhsaha badan furiin u doonato.
“Ninkaygu wuxuu ii noqday qof qariib ah ama aan la aqoon. Waxaan ka baqay inay ku biirto bulshada waxa ay ka dhihi doonaan bikradeyda, wax kasta waa filasho. Nolosheyda Ammaan kuma qabto markan kadib.”
“Xaqiiqdii ma aqaan sida aan ugu sharaxo xaaladdeyda iyo dareenkeyga xagiisa habeenkaasi kadib, laakiin mala noolaan karin ka dib markii uu hoos u dhigay dhammaan wixii tayo aan lahaa iyo awooddayda, asaga oo xuubka bikrada ka muhim yeelay, ugu dambeyntii aniga waxaan ahay qof insaan ah ee ma ihi xuub hilib ah” ayey tiri.
Xaaladda maskaxeed ee Sumaya ayaa sii xumaatay tan iyo markaas, iyada oo ka hartay la kulanka dadka ama meelo la aado.